मासु पारखीका लागि ४ सय टन अष्ट्रिजको मासु तयार – Newsagro.com :
October 1, 2015 October 2, 2015 NewsAgro0Comments agriculure, Ausrich, Butwal, Nepal, Newsagro.com, अस्ट्रिच Austrich, अस्ट्रिच नेपाल Austrich Nepal
बुटबल, १४ असोज / नेपालीहरुको ठूलो चाड दशेैंको मुखैमा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि दशैँ बजारको अन्यौलता बढेको र दशैँमा रौनकता साथ माछामासु खाएर मनाउने नेपालीहरुलाई खसीबोका आयात गर्न नपाएर मासु खान नपाइने भन्ने चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ।
यो समस्याको विकल्पको रुपमा अष्ट्रिज नेपाल प्रालीले उपभोक्ताका लागि दशैँमा पर्याप्त मासु उपलब्ध गराउने भएको छ । अस्ट्रिज नेपालले सर्वसाधारणका लागि दशैंमा पर्याप्त मासु उपलब्ध गराउने भन्दै नआत्तिन आग्रह गरेको छ । अष्ट्रिज नेपाल प्रालीका प्रवन्ध निर्देशक सिपी शर्माले यसबर्ष ५० हजार खसीबोका बराबरको मासु नेपाली उपभोक्ता सामु पठाउने तयारी भैरहेको जानकारी दिए । शर्माले भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो भनेर दशैको मासुका लागि कोही पनि निराश हुनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
“भारतले नाकाबन्दी गरेपछि दशैंमा मासु खान पाईदैन की भनेर चिन्ता नमान्नुस्, विगतका वर्षहरुमा विदेश निर्यात भएको अष्ट्रिजको मासु यसवर्ष नेपालमै विक्री वितरण गर्ने तयार गर्दैछौं र त्यो पनि सुलभ दरमा,” शर्माले भने । गतवर्ष भारतबाट दर्शैंमा ३५ हजार खसीबोका नेपाल भित्रिएकोमा भारतको नाकाबन्दीका कारण यसवर्ष ल्याउन नसकेपनि त्यसको सबै माग अष्ट्रिजले धान्ने शर्माले बताए । शर्माले अन्य समय भन्दा सस्तो र खसीको मासुको मुल्यको तुलनामा पनि सस्तो मुल्यमा अष्ट्रिज र ईमोको मासु उपलब्ध गराउने तयारी भएको जानकारी दिदैँ दशैँको विशेष प्याकेज दिन पनि बताए ।
शर्माले दशैँका लागि विशेष १० केजीको प्याकेट तयार पार्ने काम भैरहेको र जुन प्याकेटमा मासुका बिभिन्न परिकारहरु दिन सकिने गरी तयार गरिएको हुन्छ त्यसलाई प्रतिकेजी १२ सय रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । अष्ट्रिजको मासु अत्यन्त स्वस्थकर रहेको जनाउँदै चिकित्सकहरुको परिक्षण पछि मात्र डिफ्रिज गरीएको मासु बजारमा पठाईने शर्माले बताए । अहिले रुपन्देहीको सुर्यपुरा र गंगोलियामा मासुका लागि तयार भएका अष्ट्रिज दशैंको लागि कटिङ गर्न शुरु गरिएको छ । प्रालीले उत्पादन गरेको मासुको मुख्य बजार युरोप रहेको भएपनि यस बर्ष नेपाली उपभोक्ताको माग पुरा नभएसम्म बिदेश निर्यात समेत नगरीने जनाएको छ ।
गतवर्ष केही महँगोमा विक्री वितरण भएको अष्ट्रिज यसवर्ष भारतको नाकाबन्दी पछि सर्वसाधारणको समेत पहुँच पुग्ने गरी मूल्यमा केही कमि गरिएको शर्माले बताए । उनले दशैंको लागि बोनलेस र बोननेस मासुको फरक फरक मूल्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । गतवर्ष २ हजार रुपैयाँ प्रतिकेजी मूल्यमा विक्री गरिएको बोनलेस यसवर्ष दशैंको लागि भन्दै १६ सय रुपैयाँ र बोननेसको लागि ९ सय रुपैयाँ मात्र निर्धारण गरिएको बताए । गतवर्ष २ सय टन मासु विक्री गरेको अष्ट्रिज नेपाल प्रालीले यसवर्ष ४ सय टन मासु बजारमा पठाउने तयारी गरेको छ । यद्दपी मासुको माग बढेमा ८ सय टनसम्म पनि मासु बजारमा पठाउन सकिने शर्माले बताए ।
“भूकम्पका कारण उत्तरी सिमा नाकाहरु बन्द हुँदा भेडा च्याङग्रा नआउने र नाकाबन्दीका कारण भारतीय बजारबाट खसीबोका पनि नआएर मासु बिनाको दशैं मनाउनुपर्ने हो की भनेर कसैले चिन्ता लिनुपर्दैन, हामी सबै उपभोक्ताको माग पुरा गर्न सक्षम छौँ,” शर्माले सेतोपाटीसँग भने । अरुमा परनिर्भर नेपालको मासुको माग अब अष्ट्रिजले धान्ने बताउँदै शर्माले नेपाली उत्पादनमा गर्व गर्न समेत सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन् । करिव ७ बर्ष अघि रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं २२ गंगोलियामा २२ विगाहा जमिनमा स्थापना भएको अष्ट्रिज नेपाल प्रालिले पछिल्ला वर्षमा रुपन्देहीको सुर्यपुरा र दाङमा समेत अष्ट्रिज फार्म संचालनमा ल्याएको छ ।
गंगोलियामा २२ विगाह, सुर्यपुरामा ९० विगाह र दाङमा १ सय ६२ विगाहमा संचालित प्रालीमा ८ हजार भन्दा धेरै अष्ट्रिजहरु मासुको लागि तयार भएका छन् । प्राली आफँैले चल्ला उत्पादन गरी आगामी वर्षको लागि हुर्काउँदै गरेको छ । नेपालमा पहिलो पटक शुरु गरेको अष्ट्रिज नेपाल प्रालीले हालसम्म झण्डै दुई अर्व रुपैयाँ लगानी भएको जनाएको छ ।
← लिने हैंन त्, गाईरभैंसी फार्म व्यवस्थापन गर्न अनुदान !
नार्कमा एमाले कार्यकर्ता किन फालिए ? →
यो समाचार 30379 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 30055 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 21485 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 2385 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले